Indlu ye-Ecological kwisithili esihle saseDmitrovsky
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguПавел
I-ecological guest house yabantu abayi-6-8. kwindawo entle entle! Kufuphi neendawo zokutyibilika ekhephini, isixeko sakudala saseDmitrov (Kremlin, indlu yeemonki), iziko le-aeronautics (iinqwelomoya zebhaluni)
Indlu yokhuni yendalo kwimigangatho emibini, enegumbi lokuhlala elikhulu elinesibane sesibini, indawo yomlilo, ikhitshi kunye ne-sauna yomlilo. Indlu enefenitshala ye-antique kunye nengaphakathi elicingayo, eliya kukuvumela ukuba uzive ukhululekile kakhulu kwiholide yelizwe kunye nokutshona kwelanga okuhle. Kukho igadi yeziqhamo kunye nokulungiswa komhlaba kufutshane nendlu. Kwaye ulibale ngamanzi asebhotileni - apha unako kwaye kufuneka usele amanzi epompo (kakuhle - 274 m.) Kwaye uhambe nawo :)
I-Dmitrov liziko lokuzonwabisa elisebenzayo (iindawo zokungcebeleka kwe-ski, iindlela zebhayisekile ehlathini), idolophu yakudala ene-Kremlin ekhethekileyo, iimonki kunye neetempile, ezihamba kwiindawo zasezidolophini. Ibhotwe lomkhenkce, amadama okuqubha, iziko lokugoba
Umbuki zindwendwe ngu- Павел
abanini bahlala kufutshane kwaye bahlala bekulungele ukunceda